Mountain Television nation's first popular and leading analytical news channel. Mountain covers all the latest news from Nepal, Political News, Science news, Social news, Sport news, Ecomony news, Business, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actores, Audio, Video, Interview and many more. कानुनी कठघरमा रहेका व्यक्तिलाई सभामुखमा अघि सार्नु कति जायज ? – Emountain TV
अग्नी सापकोटामाथि कानुनी प्रश्न
काठमाडौं, ६ माघ । अन्तत् डा.शिवमाया तुुम्बाहाम्फेले उपसभामुख पदबाट राजीनामा दिनुभएको छ । उहाँको राजिनामा सँगै सभामुुख पदको निर्वाचन आगामी माघ १२ गते गर्ने गरी निर्वाचन कार्यतालिका सार्वजनिक गरिएको छ ।
सभामुख पदका लागी नेकपाले अग्नि सापकोटालाई उम्मेदवार बनाउने निर्णय गरेको छ । उम्मेदवार तोकिएसँगै सभामुख निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढे पनि सापकोटाविरुद्ध सर्वाेच्च अदालतमा विचाराधिन अवस्थामा रहेको द्वन्द्वकालीन मुद्दा फेरी चर्चामा ल्याइएको छ ।
सभामुख र उपसभाुमुख संबिधानमा फरक दल र फरक लिङ्गको हुनुुपर्ने व्यवस्था छ । संबिधानमा रहेको यहि व्यवस्था अनुुसार उपसभामुखलाई राजीनामा दिन लगाएर नेकपाले सभामुख आफैले राख्ने निर्णय गरेको छ ।
सभामुख आफैंले राख्ने निर्णय गरेको नेकपाले उपसभामुख डा.शिवमाया तुुम्बाहाम्फेलाई भने राजीनामा दिन बाध्य पारेको छ । नेकपा सचिवालयले दिएको निर्देशन नमान्ने बताउँदै आउनु भएकी तुम्बाहाम्फेले नेकपा भित्र पितृसतात्मक सोच हावी हुँदा आफू राजीनामा दिन बाध्य भएको बताउनु भयो ।
उपसभामुुखलाई राजीनामा दिन लगाएको नेकपाले सभामुुख पदका लागी स्थायी समिति सदस्य अग्नि प्रसाद सापकोटालाई उम्मेद्धार बनाउने निर्णय गरेको छ । नेकपा भित्रको लामो समयको रस्साकस्सी पछी नेकपाले सापकोटालाई सभामुख बनाउने निर्णय गरेको हो ।
सत्तारुढ दलले सभामुुखमा नामको टुङ्गो लगाउन नसक्दा एक महिनादेखि प्रतिनिधि सभा बैठक अबरुद्ध हुँदै आएको थियो । नेकपाले सभामुखमा अघि सारेको अग्नी सापकोटा सिन्धुपाल्चोकबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद हुनुहुन्छ ।
दुुई पटक मन्त्री भैसक्नु भएका सापकोटाले सभामुखको जिम्मेवारी पनि कुुशलतापुर्वक निभाउन सक्नेमा सत्तारुढ दलका सांसदहरु विश्वस्त देखीन्छन् ।
सापकोटालाई सभामुखमा अघि सारेकोमा सत्तापक्षका सांसदहरु खुशी देखिए पनि प्रमुुख प्रतिपक्षी दलका साांसदले भने असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । कानुनी कठघरमा रहेका व्यक्तिलाई सभामुखमा अघि सार्नु नेकपाको गल्ती आएको कांग्रेसका एक सांसद बताउँछन् ।
संबिधानमा प्रतिनिधीसभाको सदस्य जो सुकैपनि सभामुुखपदका लागी योग्य उम्मेदवार बन्न सक्ने प्राबधान रहेको छ । यसो हुँदा सापकोटा नेकपाले भने जस्तै उपयुक्त उम्मेदवार हुनुहुन्छ ।
फौजदारी मुद्दा लागेका व्यक्ति उम्मेदवार हुन पाउने कि नपाउने बहसको विषय बनिरहेको छ । सापकोटामाथि लागेको फौजदारी मुुद्धा अहिले संबैधानीक इजालासमा बिचाराधिन रहेको छ ।
द्धन्द्धको समयमा काभ्रेका अर्जुन लामा हत्याकाण्डमा सापकोटा मुुछिनुु भएको छ । यस्तो अवस्थामा सभामुुख बनाउँदा यसले भविश्यमा फेरी दुर्घटना निम्त्याउन सक्ने वरिष्ठ अधिवक्ता हरि उप्रेतीको ठम्याँइ छ ।
सत्तारुढ दलले सभामुखको उम्मेदवार चयन गर्न नसक्दा प्रतिनिधि सभा बैठक एक महिनादेखि अवरुद्ध हुँदै आएको थियो । संसदमा दुई तिहाईको नजिक भएर पनि उम्मेदवार छान्न नसकेकोमा नेकपा निकै आलोचित हुँदै आएको थियो ।
अहिले उम्मेदवार छानेर अवरुद्ध प्रतिनिधि सभा बैठकलाई सुचारु त गराएको छ, फेरी छनौट गरिएको उम्मेदवारको छवी माथी प्रश्न उठार्इंदैछ । के नेकपामा विवादरहित र स्वच्छ छवीका नेताको खडेरी नै परेको हो त ? राजनीतिक वृत्तमा फेरी नेकपामाथि प्रश्न उठाइंदैछ ।